Searching someone's co.cc site information(Educational Purpose only) ~ YGNBlogger
Searching someone's co.cc site information(Educational Purpose only)
02:55 Co.cc Hacks, Whois sites No comments
co.cc whois , co.cc whois finder , co.cc whois hacks , co.cc hacks , Searching someone's co.cc site information
co.cc Whois ကအသုံးဝင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကတော့အသုံးမ၀င်ဘူးလို့ထင်မှာပေါ့။ ဘယ်လောက်အသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင် ၊ ဒါကခင်ဗျားတို့သိချင်တဲ့လူရဲ့အီးမေးလ်ရယ်၊ အချက်အလက်တွေရှာလို့ရတာပေါ့။ ဟတ်ကင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ချောင်းကြည့်နည်းပါ။ ဒီနည်းနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရပေမယ့်၊ ကိုကိုမမစပ်စုတွေအတွက်တော့ကောင်းပါတယ်။ Google မှာရှာရန်မလိုပါ။
www.co.cc ကိုသွားပါ။ ပြီးရင် Whois ကိုသွားပါ။ အပေါ်မှာ လက်ညိုးထိုးထားပါတယ်။
မတွေ့ရင် [click here!] ကို click ပါ။ www.[ ].co.cc မှာ ခင်ဗျားတို့သိပြီးဖွင့်လို့ရတဲ့ co.cc ကိုထည့်ပါအဲ့နေရာမှာ။ အောက်မှာကတော့ captcha မှာသင်မြင်တဲ့အတိုင်းထည့် အင်္ဂလိပ်လိုထည့်ပါ။ ပြီးရင် Whois Lookup ကို click ပါ။
ခင်ဗျားတို့သိချင်တဲ့အရာတွေကိုခဏစောင့်ပါ။ Loading လုပ်နေပါတယ်။ ပြီးရင်အဲ့အောက်ကိုဆင်းပြီးသေချာကြည့်ပါ။ တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။